नीता अम्बानीको लिपिस्टिकको मुल्य ४० लाख, आफ्नौ प्राइभेट प्लेन ! – Rastriyapatrika
एजेन्सी। मुकेश अम्बानीकी श्रीमती नीता अम्बानीको जीवनशैलीप्रति चासो नराख्ने को होला ? नीता एक व्यवसायी महिला हुन् । उनको पहिरन, रहनसहन र दैनिक जीवनशैली अन्यको भन्दा निकै फरक छ । उनको विलासी जीवनशैलीले धेरैलाई आश्चर्य पार्ने गरेको छ।
नीता अम्बानीले दैनिकी चियाबाट सुरु हुन्छ । उनी हरेक विहान जापानको सबैभन्दा पुरानो क्र्रेरी ब्राण्डको नोरिटेकको कपमा चिया पिउँने गर्छिन् । यो कपको मूल्य ३ लाख भारु पर्छ।
नीता अम्बानीको मनपर्ने कार ‘मेबेक ६२’ हो । जुन उनका पति मुकेश अम्बानीले उनलाई उपहारको रुपमा लण्डनबाट मगाएका थिए । ‘मेबेक ६२’ कार भारतमा भित्र्याउने पहिलो व्यक्ति हुन् मुकेश अम्बानी । यसको मूल्य १० करोड भारु पर्छ।
ता अम्बानीको आफ्नौ प्राइभेट प्लेन छ । जुन उनलाई मुकेश अम्बानीले उनको जन्मदिनमा दिएका थिए । उक्त प्लेनको मूल्य ४१५ करोड भारु रहेको छ ।